Dugsi Uu Dhigto Hal Arday - Xogside-news Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Dugsi Uu Dhigto Hal Arday
Dugsi Uu Dhigto Hal Arday
Aroun Anderson oo ah ardayga keliya ee wax ka barta dugsiga ayay qasab ku tahay inuu ka jawaabo su’aalaha macalinka, maaha inuu yahay kan ugu maskaxda badan laakiin maba jiro ardayga kale oo dhigta dugsiga.
Inkasta oo waalidiinta Ingiriiska ay ka cabanayaan fasalada qaarkood oo ardaydu tiro badan tahay haddana Aroun wuxu muddo 11 sanno ah dhiganayay dugisgan ku yaalla jasiiradda Autsacrim ee Scotland (Ingriiska). Dawladda ayaa u samaysay dugisga garoon , maktabad iyo qol muusiga lagu sameeyo.
Golaha deegaanka ayaa bixiyay 75 kun oo Ginni , si uu wiilkaasi u sii wadan karo waxbarashada uu keli ku noqday ee jasiiraddan.
Previous articleKamarad Lagu Ogaanayo Xaalada Ardaygu Ku Jiro Wakhtiga Kalaaska
Next articlemashruuc 7milyan ku baxayo oo laga dhegax dhigay xeebta batalaale ee magaalada Berbera